Tselatra · Janoary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Tselatra · Janoary, 2011
Tantara tamin'ny Tselatra tamin'ny Janoary, 2011
Araka ny voalazan'ny mpanao gazety Maraokana mpanohitra iray nifampitafa tamin'ny vohikalam-pampahalalam-baovao Frantsay Rue89 [fr] dia toa tonga nanao fitsidihana manokana (visite privée) any Frantsa nanomboka ny alakamisy teo ny mpanjaka Mohamed VI avy any Maraoka, ary mipetraka ao amin'ny Lapaben'ny fianakaviany izay akaiky an'i Parisy. Miteraka tombatombana isan-karazany amin'izay tena tanjon'ny fitsidihana ity fivoahana mankany ampitan-dranomasina ity amin'izao gidragidra ankapobeny mitranga any Afrika Avaratra sy ny “Atsinanana akaiky” (an'i Eoropa mazava loatra), indrindra rehefa voasoratra fa toa misy fiaraha-miasakafo manokana iarahana amin'ny Filoha (Frantsay) ao anatin'ny fandaharam-potoana.
Mpanoratra Claire Ulrich Nandika Andriamifidisoa Zo
(Ny rohy dia amin'ny teny Anglisy sy Koreana)
Mpanoratra Lee Yoo Eun Nandika avylavitra
Tonizia: Voatafika nandritry ny hetsi-panoherana ilay mpanao gazety Nebrass Hedhili
Nanoratra i Nawaat fa niharan'ny herisetra ara-batana ilay mpanao gazety Nebrass Hedhili, polisy tsy nanao fanamiana no nahavita izany tao afovoan'i La Chebba(fr). Manavao matetika ny feon-gazety mikasika ny hetsi-panoherana Sidi Bouzid(fr) i Nawaat.
03 Janoary 2011
“Sarintanim-panampiana ho an'ny Ririnina Rosiana” (Holoda.info), tetikasa iray vaovao ho fitrandraham-baovao avy eny ifotony, no natomboka napetraka tao Rosia mba hitaterana ny olan'ny vahoaka tratry ny hatsiaka mamirifitry. Ny masoivohom-baovao RIA Novosti mitatitra [RUS] fa ny tanjon'ny vohikala dia ny hitondra fanentanana mikasika ireo olona miaritra ny tsy fisian'ny fitaovana fanafànana na rafitra hafa ho fanohanana any Rosia, sy ho fanamoràna ny fifanampian'ny rehetra. Ny tetikasa dia natombok'ilay vondrona mpanolo-tena an-tsitrapo iray izay tany am-piandohana dia nandefa ny “Sarintanim-panampiana”, sehatry ny Ushahidi [ENG] noho ny doroala Rosiana (Russian-fires.ru).
Mpanoratra Gregory Asmolov Nandika avylavitra